फुटबलले गुमाएको मणि- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
फुटबलले गुमाएको मणि
नेपाली फुटबल इतिहासका अभूतपुर्व खेलाडी हुन् मणि शाह । फुटबल खेल्नकै लागि जन्मिएका ‘गड–गिफ्टेड’ यी पूर्वकप्तानको सोमबार ५१ वर्षको अल्पायुमै निधन भयो ।
जेष्ठ ५, २०७५ हिमेश वज्राचार्य
काठमाडौँ — फुटबलमा झगडाका अनौठा किस्साहरू धेरै सुनिन्छन् । एउटा यस्तै घटना हो, ठमेल–११ र थ्री–स्टारका खेलाडी–समर्थकबीच दशरथ रंगशालामा भएको झगडा । यो ०३८ सालअगाडिको घटना हो, अनि अवसर सहिद स्मारक लिग । दशरथ रंगशालाको मैदान युद्धभूमिमा परिवर्तन भएको थियो । त्यति बेलाको त्यो खेल र झगडा हेर्नेहरू अझै भेटिन्छन् । समस्या के छ भने झगडाको कारणलाई लिएर ठमेल समर्थक एकथरी सुनाउँछन् भने थ्री–स्टारका शुभेच्छुक अर्कोथरी ।
जे होस्, यो झगडाको ठूलै योगदान रह्यो, नेपाली फुटबलमा । यो झगडाले ठमेल–११ माथि प्रतिबन्ध लाग्यो । र, प्रतिबन्धसँगै जन्म भयो, नेपाली फुटबलमा सर्वाधिक सफल र लोकप्रिय क्लब— मनाङ–मस्र्याङ्दी । यो ठमेल–११ को अर्को रूप हो । नेपाली घरेलु फुटबलमा सुरुआती दिन व्यावसायिकता भित्र्याउने श्रेय यही क्लबलाई जान्छ । लिगमा मनाङ मस्र्याङ्दीले ‘डी’ डिभिजनबाट खेल्न सुरु गरेको थियो र प्रत्येक वर्ष माथि उक्लँदै ०४२ सालमा त ‘ए’ डिभिजन लिग नै जित्यो ।
अरू कतै सुन्न नपाइने फुटबलको अद्वितीय कथा हो, यो । यो कथाका प्रमुख नायक हुन्, उनै मणिविक्रम शाह । छोटोमा मणि शाह, मायाले भन्दा— मणि दाइ । मनाङ मस्र्याङ्दीको जन्म, त्यसले प्राप्त गरेको अहिलेको उचाइ, अनि प्रशस्त समर्थकहरूको संख्या, यसपछाडिका प्रमुख कारण हुन्, मणि । क्लबको पर्यायजस्तै रहे, उनी । कोही खेलाडी क्लबभन्दा ठूलो त हुन्न । मनाङ मस्र्याङ्दीभन्दा मणि पनि ठूला होइनन् । तर क्लबको इतिहासमा उनको उपस्थितिको आकार भने निकै ठूलो रह्यो ।
फुटबलको अर्को एक विश्वकपको सुरुआत धेरै नजिक छ, महिना दिन पनि छैन । पूरा विश्व विश्वकप फुटबल भनेपछि त्यसको पछाडि लाग्छ । नेपाल पनि किन अपवाद हुन्थ्यो र ? यहाँ पनि फुटबलको विश्वकप भनेपछि हुरुक्कै हुनेहरू धेरै छन् । यसको जग बसाउने काम भने सन् १९८६ को विश्वकपले गरेको थियो । मेक्सिकोमा भएको त्यो विश्वकप अर्जेन्टिनाले जितेको थियो र त्यसका कप्तान थिए, डिएगो म्याराडोना । नेपाली फुटबल प्रशंसकमाझ त्यो विश्वकपको निर्णायक छाप छ ।
टेलिभिजनको माध्यमबाट सर्वसाधारणले आफ्नै कोठमा हेर्न पाएको पहिलो विश्वकप । त्यही विश्वकप जित्ने अर्जेन्टिना र म्याराडोनामाथि नेपाली प्रशंसक दंग परे । पहिलो प्रेमजस्तै थियो, त्यो । त्यसैले त हो, अहिले पनि नेपालमा कुनै एक टिमका सबैभन्दा बढी समर्थक छन् भने त्यो अर्जेन्टिनाको हो । ठीक यही बेला हो, मनाङ मस्र्याङ्दीको वास्तविक उदयको समय । टिमका सबै पदाधिकारी र खेलाडी अर्जेन्टिनाकै समर्थक बने । अनि निर्णय भयो, क्लबले पनि अर्जेन्टिनाकै जस्तै जर्सी लगाउने, सेतो र आकाशे रंगको धर्सो–धर्सो भएको जर्सी ।
मणिले आफूलाई पनि म्याराडोनाकै रूपमा ढाले । उचाइ पनि उस्तै, हल्का पुड्को नै । कपाल पनि हल्का लामो, घुम्रिएको । म्याराडोना पनि ‘गड गिफ्टेड’ खेलाडी, मणि पनि ‘गड गिफ्टेड’ । दुवै प्राकृतिक रूपमै ‘लेफ्ट–फुटेड’ । गोल पनि गर्ने, गोलका लागि उत्तिकै राम्रो अवसर पनि सिर्जना गर्ने । अहिले दुवैका पुराना तस्बिर पल्टाएर हेर्नुपर्छ, साँच्चै दुवैमा धेरै समानता पाइन्छ । त्यसो त म्याराडोनाको यो रूप अरू धेरैले पछ्याए, तर त्यसमा एउटा के कमी थियो भने म्याराडोनाको जस्तो खेल थिएन ।
तर मणिमा त्यो पनि थियो । नेपालमा जन्मेर उनी मणि भए, अर्जेन्टिनामा जन्मेको भए, अर्को म्याराडोना नै हुन्थे । म्याराडोनालाई भर्खर टेलभिजनमा हेरेकाहरूले मणिलाई पनि त्यस्तै रूपमा पाए । र, जर्सीका कारण अर्जेन्टिनी टिमजस्तै देखिन्थ्यो मनाङ मस्र्याङ्दी । उनीहरूको खेल हेर्न दशरथ रंगशालामा दर्शकको ओइरो लाग्थ्यो । मैदानबाहिर पनि म्याराडोना र मणिमा उस्तै धेरै समानता पाइन्छ । मैदानबाहिर म्याराडोना उपद्रोही पाराका मान्छे हुन्, त्यसको बाक्लो झल्को मिल्थ्यो मणिमा पनि ।
मैदानमा म्याराडोना जसरी झेली पाराका थिए, मणि पनि कम थिएनन् । मणिले म्याराडोना पाराले हातले त गोल गरेनन्, तर सायद अरू धेरै गरे । विशेषत: साथी भनेपछि उनी ज्यानै फाल्थे । साथी खेलाडीलाई कसैले केही गर्‍यो भने सबैभन्दा अगाडि सरेर आक्रामक हुन्थे यिनै मणि । उता म्याराडोनाले केही खराब बानी पाले । यो बानी कति नराम्रोभन्दा यसले उनलाई धेरैपल्ट मृत्युको मुखमा पुर्‍याइसकेको छ । यता मणि पनि यस्तै निस्के । नतिजा नमजाको निस्कियो, नेपाली फुटबलले पाएका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रा खेलाडी मणिले अन्तत: मृत्युको आत्मसात् गरे, यसै साता ।
कसैले पनि विवाद नगरे हुन्छ, मणि नेपाली फुटबलले पाएका अहिलेसम्मकै नम्बर १ खेलाडी हुन्, फुटबल खेल्नै जन्मेका । अनि ‘गड–गिफ्टेड’ । ५१ वर्षमै भएको उनको निधन साँच्चै अल्पायुमै थियो । उनले आफ्नो शरीर र स्वास्थ्यप्रति धेरै नै हेलचक्र्याइँ गरे । जति बेला उनी आफ्नो खेल जीवनको उत्कर्षमा थिए, अहिलेको ठमेलले पनि बिस्तारै आफ्नो रूप लिइरहेको थियो । त्यही ठमेलमा एक समय मणिले जे भन्थ्यो, त्यही हुन्थ्यो । ठमेलका ‘राजा’ थिए, उनी । सायद कसैलाई बिग्रनका लागि यस्तै–यस्तै कारण पर्याप्त हुन्छ । उनी मस्त मनमोजी पाराका थिए । साथीहरू कालधाराको उनको घरमा दिनहुँजस्तो पुग्थे । मोजमस्तीमा बितेका दिन थिए, ती ।
त्यसमाथि उनको नजिकको दोस्ती थियो, तत्कालीन राजकुमार दीपेन्द्र र अधिराजकुमार निराजन शाहसँग । एउटा तथ्य धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ— दीपेन्द्र र निराजन फुटबल भनेपछि हुरुक्कै हुन्थो । सबैले जानेको तथ्य के थियो भने उनीहरू दुवैमा धेरै खराब बानी पनि धेरै थियो । विशेषत: निराजन अधिकांश समय नशामै हुन्थे । मदिरा उनलाई प्रिय थियो । यस्तै स्थितिमा उनीहरू धेरैपल्ट सातदोबाटोको एन्फा कम्प्लेक्समा पुगे । फुटबल खेले र खेलेको हेरे पनि । अधिकांश समय उनीहरूसँग मणि पनि हुन्थे । पछि मणिको दोस्ती पारस शाहसँग पनि राम्रै रह्यो । मणि खुलैरै राजतन्त्रको समर्थन गर्थे र राजा फर्कनुपर्ने धारणा राख्थे । यससँगै उनले राजपरिवारकै जस्तो बानी व्यहोरो पनि कायम राखे । समस्या त्यहीं थियो । तर, उनले यही दोस्तीमा टिकेर नेपाली फुटबलमा धेरै फाइदा लिन खोजेनन् अथवा सकेनन् पनि । भनिन्छ, केही साथी खेलाडी र पदाधिकारीबीच पनि घेरिएर रहे, जसको रुचि पिउनु र पिलाउनुमा बढी थियो ।
मणिलाई यी खराब बानीबाट जोगाउनुपर्नेमा उल्टै यो नै राम्रो भनेर भ्रम छर्ने तिनै थिए । पछि यिनीहरू हराए अथवा आपैंm सुध्रिए तर मणिले त्यति पनि गर्न सकेनन् । खास–खास साथीले मणिलाई लामो स्वार्थहीन साथ पनि दिए । उनको स्कुल पढ्दाका साथीहरूको एक समूह थियो, जसले उनलाई ठीक स्थितिमा राख्ने धेरै मद्दत गरेको थियो । फुटबलकै केही पुराना खेलाडी र पदाधिकारीले पनि उनलाई ‘हेल्थी लाइफ–स्टायल’ मा रहन बारम्बार अनुरोध गरे तर सकेनन् ।
श्रद्धाञ्जलीका लागि मणिको शव दशरथ रंगशालामा राखिएको थियो । यो त्यही मैदान थियो, जहाँ उनले आफ्नो वास्तविक परिचय बनाएका थिए । त्यही मैदानमा मणिको त्यो स्थिति देखेर कैयौंले आफूलाई रोक्न सकेनन् । धेरै रोए । यी रुनेहरू तिनै थिए, जसले मणिलाई सुधार्न खोजे तर असफल रहे । त्यहाँ मणिलाई यो हालतमा पुर्‍याउन बाटो खन्नेहरू पनि धेरै थिए तर तिनको आँखामा आँसु थिएन । गाँठी कुरा के भन्दा धेरैले उनको नाम, प्रसिद्धि र पहुँच प्रयोग गरे ।
पछिल्लो एन्फा चुनावमा पनि उनको त्यही नाम र छवि धेरै प्रयोग भयो । चुनावमा जितेमा मणिलाई यस्तो दिने उस्तो दिनेजस्ता धेरै पनि भनियो तर त्यस्तो केही भएन । भनिन्छ, यसै कारणले उनी दु:खी थिए, फेरि एकपल्ट उनको मनमा चोट थपिएको थियो । चोटहरूको शृङ्खलामा यो अर्को चोट थियो । तर, यो अन्तिम थियो । आफ्नै शरीरले उनलाई धोका दिन सुरु गरिसकेको थियो, यो धोका पनि थपियो, उनै उठ्नै सकेनन्, कहिल्यै पनि ।
यता मैदानमा पुराना दिन सम्झने हो भने ती साँच्चै गज्जब नै थिए । उनले धेरै लामो समय खेल्न सकेनन् तर जति खेले, धेरै राम्रो खेले । नेपालको राष्ट्रिय जर्सीमा उनले ६ गोल गरे । त्यसमध्ये सन् १९८७ मा ओलम्पिक छनोटका लागि थाइल्यान्डविरुद्ध बैंककमा पहिलो गोल गरे । त्यो खेल नेपाल २–१ ले पराजित रह्यो तर उनको त्यो गोलमा कायल हुने धेरै थिए । नेपाली टिमले निकै राम्रो खेलेको कोलकातामा भएको दोस्रो दक्षिण एसियाली खेलकुद पनि एक हो ।
सन् १९८७ को अवसरमा मणिले भुटानविरुद्ध दुई गोल गरे । दक्षिण एसियाली खेलकुदकै त्यसयताका दुई संस्करणमा उनले भारतविरुद्ध एक–एक गोल गरे । उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध गोल भने भारतविरुद्ध ढाका दक्षिण एसियाली खेलकुदमा थियो । सन् १९९३ मा नेपालले फुटबलमा स्वर्ण जितेको थियो । निर्धारित समयको खेल सकिन लाग्दा नेपाल २–१ ले पछाडि थियो । ठीक त्यही बेला उनले फ्रिकिकबाट सुन्दर गोल गरे । युट्युबमा अझै त्यो गोल हेर्न सकिन्छ र भन्न करै लाग्छ— वाह कति सुन्दर गोल !
मणिको प्रसङ्गमा एउटा चर्चा बारम्बार दोहोरिने गर्छ र यो पुरानो घटना पनि दशरथ रंगशालाकै हो । अवसर थियो, राष्ट्रिय लिग । त्यसमा अर्जुन लामा खुबै चम्के, उनी छ
गोल गरेर ‘हाइएस्ट स्कोरर’ भए । उनले एक खेलमा ह्याट्रिक पनि गरे ।
ह्याट्रिकका यी तीनै गोलमा पास मिलाएका थिए, मणिले । पास पनि कस्तो सटीक भन्दा त्यसमा अर्जुनलाई गोल गर्न कुनै कठिनाइ नै भएन । अझ भनौं, त्यो गोलभन्दा त्यसका लागि उपलब्ध भएको पास राम्रो र निर्णायक थियो । अर्जुन कति धेरै कृतज्ञ भए भने उनले तेस्रो गोलपछि मैदानमै मणिलाई खुट्टामै ढोगे । साँच्चै यत्तिको मान्नैपर्ने खेलाडी थिए, उनी ।
मणिको निधनयता धेरैले लेखे, ‘नेपाली म्याराडोना’ रहेनन् । उनी वास्तवमै म्याराडोनाका ठूला प्रशंसक थिए, उनले जस्तै खेल्न खोजे । सायद खेल्ने समय उनलाई कसैले म्याराडोना भन्दा पनि खुसी लागेको थियो । जीवनको अन्त्यतिर भने उनी यो छविबाट निस्कन चाहन्थे । उनी नितान्त मणि नै मात्र हुन चाहन्थे । उनले भनेका थिए, ‘धेरैले मलाई नेपाली म्याराडोना भन्छन् । अहिले लाग्छ, मलाई मेरो खेलका लागि नै सबैले सम्झे राम्रो । मलाई मणि भनेर चिनेकै बेस ।’ जीवनले दिएका धेरै पाठपछि उनको यो नितान्त आफ्नो धारणा थियो । मणि वास्तवमै गज्जब पात्र हुन् । इतिहासबाट सिक्ने हो भने मणि यस्तै सिक्न सकिने पात्र हुन् । नेपाली फुटबलले एक युगमा एकैपल्ट पाएका राम्रा खेलाडी हुन् मणि जो अबको युगमा पनि सम्झनामा बाँचिरहन्छन् । हाद्र्धिक श्रद्धाञ्जली मणि दाइ !
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७५ ०८:०३
जेष्ठ १, २०७५ हिमेश वज्राचार्य
काठमाडौँ — नेपाली फुटबलसँग जति नजिक छन्, उनीहरूमध्ये सबै नयाँ पुस्ताका लागि मणि शाह ‘मणिदाइ’ हुन् । पछिल्लोपल्ट उनी सार्वजनिक रूपमा देखा परेका थिए, सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा भएको एन्फा निर्वाचनमा ।
त्यति बेला उनी केही गलेका देखिन्थे । चुनावको सबै परिणाम आएपछि एकथरीले नारा पनि लगाए, ‘यो जित कसको, मणि दाइको ।’ केहीले उनलाई काँधमा पनि उचाले । सामान्य कुराकानीमा उनले सोधेका थिए, ‘के छ भाइ ?’ यिनै मणिदाइ सोमबार साँझ रहेनन् ।
सोमबार मध्यान्हसम्म नर्भिक अस्पतालबाट समाचार आइसकेको थियो, यसपल्ट सायद उनी निको हुने छैनन् कि ? नभन्दै अबेर साँझ पुष्टि भइहाल्यो, उनको स्तब्धपूर्ण निधनको । यससँगै नेपाली फुटबलले गुमाएको छ, इतिहासकै सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी । उनी भर्खर ५१ वर्षका थिए । सायदै उनले आफ्नो शरीर र स्वास्थ्यप्रति धेरै नै अन्याय गरे, हेलचेक्रयाइँ गरे । उनी आफ्नो केही बानीबाट टाढा रहेको भए अझै हामीमाझ हुने थिए । उनलाई चाँडै ‘अलविदा मणिदाइ’ भन्ने समय आयो ।
उनी जति वर्ष बाँचे । सबैले मानेका छन्, उनी जत्तिका उत्कृष्ट फुटबल खेलाडी अरु छैनन् । उनले लामो समय एकै लयमा खेल्न सकेनन् । तर केही वर्ष यति राम्रो फुटबल खेले कि त्यसको वर्णन गरेर साध्य हुन्न । काठमाडौंको कालधारा पुग्ने क्रममा एउटा गल्ली आउने गर्छ र त्यसको नामै रहेको छ, मणि गल्ली । त्यही गल्लीमा उनको घर छ । उनकै नामले गल्लीको पनि नाम रह्यो । नेपाली फुटबलका यसरी खेलाडीको नामबाट टोलको नाम रहेको कसैको पनि छैन ।
मणि कस्ता खेलाडी थिए त ? नेपाली फुटबलले अहिलेसम्म पाएका जति पनि खेलाडी छन्, त्यसमध्ये उनी एकमात्र ‘गड गिफ्टेड’ खेलाडी हुन् । सिधाभन्दा उनी जन्मेको नै फुटबल खेल्नका लागि थिए । त्यसैले भगवान्ले पनि उनलाई साँच्चै राम्रो र मीठो फुटबल खेल्ने कौशलता प्रदान गर्‍यो । धेरै अवसरमा उनीसँग एउटै प्रश्न बारम्बार दोर्‍याएर सोधेको छु । तर उनले ठ्याक्कै उत्तर कहिल्यै दिएनन् । प्रश्न थियो, ‘के मणि नेपाली फुटबलका सबैभन्दा राम्रा खेलाडी हुन त ?’
उनको उत्तर हुने गथ्र्यो, ‘यो मैले भन्ने होइन, अरुले भन्ने हो ।’ जतिले उनको खेल हेरे, सबैले एउटै स्वरमा भन्ने गर्छन्– उनी जत्तिको फुटबल खेलाडी नेपालले पाएको छैन ।
नेपाली फुटबलको नजिक रहेका धेरैसँगको कुराकानीमा एउटा निचोड के निस्कने गरेको छ भने नेपाली फुटबलले सम्भवत: तीन उत्कृष्ट खेलाडी पाएको छ, मणिसँगै गणेश थापा र उमेश प्रधान । यिनै थापा र प्रधानले कुराकानीले भन्ने गरेका छन्, ‘खासमा राम्रो त मणि हुन् ।’
उनी नेपालकै मात्र उत्कृष्ट खेलाडी थिएनन्, दक्षिण एसियाकै पनि राम्रा खेलाडी हुन् । भारतीय पूर्व कप्तान भाइचुङ भुटियाले पनि भनेका छन्, ‘दक्षिण एसियामा मैले मणि शाह जत्तिको राम्रो खेलाडी देखेकै छैन ।’ सन् १९९३ मा नेपालले छैटौं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्नका एक स्टार हुन् मणि । उनको गतिलो योगदानले नै नेपालको स्वर्ण सम्भव भएको थियो । भारतविरुद्ध फ्रि–किकमा सम्भव त्यो दोस्रो गोल, कसले भुल्न सक्छ र ?
मणि नेचुरल लेफ्ट फुटेड थिए । मौका पायो कि गोल गर्ने । नभए खुबै राम्रो पास निकाल्ने । भनेको ठाउँमा उनी बल खसाल्न सक्थे । बल पनि यसरी खसाल्थे कि त्यो पास पाउने खेलाडीलाई गोल गर्न समेत सजिलो हुने । उनी सुरुमा फरवार्डबाट खेल्थे । पछि मिडफिल्डमा झरे । कताबाट खेल्दा सजिलो त ? उनको जवाफ थियो– फरवार्ड । मणिलाई गोल गर्नु खुबै मनपथ्र्यो । त्यसैले उनी सुरुमा फरवार्ड भए । नेपालका पूर्व प्रशिक्षक जो किनरले उनीभित्र एउटा मिडफिल्डमा हुनुपर्ने सबै गुण देखे, त्यसैले मिडफिल्डर बनाए ।
उनको पालाका जति पनि नाम चलेका खेलाडी थिए, ती सबैले लामो–लामो कपाल पाल्थे । उनको पनि लामो कपाल थियो । त्यसमाथि उनको कपाल प्राकृतिक रूपमा घुम्रेको । उनी हेर्दैमा म्याराडोना जस्ता थिए । सन् १९८६ को विश्वकपमा म्याराडोना के चम्के, मणिले पनि उनको केही केही शैलीलाई पछयाए । हुन पनि एक समय मणिको खेल म्याराडोनाकै जस्तै उत्कृष्ट थियो । त्यसैले उनलाई धेरैले नेपालका म्याराडोना पनि भने ।
मणि म्याराडोनाका फ्यान त थिए नै । तर उनलाई कसैले म्याराडोना भनेको भने रूचेन । उनी आफ्नै नामले चिन्न चाहन्थे । मणिका बुवा लक्ष्मणविक्रम शाह त्यो बेलाको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का मुख्य प्रशिक्षक थिए । उनको मुख्य विधा त एथलेटिक्स थियो । विद्या व्यायाम मन्दिरबाट पनि फुटबल खेले, त्यो बेलाको चलनअनुसार ‘लेफ्ट आउट’ । उनी आफ्ना छोरालाई लिएर रूपक शर्माको फुटबल हेर्न दशरथ रंगशाला पुग्थे । सबैको अगाडि भन्थे, ‘यो छोरालाई पनि फुटबल खेलाडी बनाउँछु ।’
त्यो बेला काठमाडौंमा ५ फिट बराबरका खेलाडी मात्रको प्रतियोगिता चल्ने गथ्र्यो । खेलहरू भने हुने गथ्र्यो रत्नपार्कमा । त्यस्तै कुनै एक प्रतियोगितामा उनले त्यौडबाट खेले । पछि उमेर समूहको फुटबलका लागि हुने छनोटमा भिडे र चुनिए, सन् १९८३ को प्रिन्सेस कपका लागि । बैंककमा हुने यो प्रिन्सेस कप नै उनी सहभागी पहिलो ठूलो औपचारिक प्रतियोगिता थियो । सन् १९८४ मा पनि उनले प्रिन्सेस कप खेले, त्यति बेला कप्तान पनि थिए ।
नेपाल त्यस बेला दोस्रो भएको थियो र मणिले ८ गोल गरेका थिए । उनी बने, हाइएस्ट स्कोरर । त्यही वर्ष त भएको थियो, काठमाडौंमा पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुद । मणिले ढाकामा भएको दोस्रो दक्षिण एसियाली खेलकुददेखि मद्रासको सातौं दक्षिण एसियाली खेलकुदसम्म खेले । काठमाडौंमै भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदको त्यो पहिलो संस्करणमा पनि उनी कुनै न कुनै रूपमा जोडिएकै मान्नुपर्छ । किनभने उनी थिए, बल ब्वाई ।
पोस्टको ठीक पछाडिको भाग उनको हुने गथ्र्यो । उनी खुबै घोरिएर गोल कसरी हुन्छ भनेर हेर्थे । उनले त्यति बेला नेपालले खेलेका सबै चारै खेले हेरे । नेपालले गरेको प्रत्येक गोलको मज्जा पनि खुबैसँग लुटे, नजिकको दूरीबाट । दोस्रो दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि भनेर फुटबलमा नयाँ प्रशिक्षक भित्रिएका थिए सान्तोस । उनी ब्राजिली थिए । उनले मणिलाई फ्रि–किक र पेनाल्टीको विशेष अभ्यास पनि गराएका थिए । भारतविरुद्ध ढाकामा मणिको फ्रि–किक र पेनाल्टीमा गोल त्यसैको परिणाम त थियो ।
मणिले नेपालका लागि कुल ४८ क्याप जिते, बैंककमा भएको एसियाली खेलकुद उनको अन्तिम प्रतियोगिता रह्यो । त्यस एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा मणिले नेपालको झण्डा बोकेका थिए । उनलाई यसमा खुबै गर्व थियो । तर बैंककमा उनले कुनै खेल खेलेनन् चोटका कारण । यससँगै उनको खेलजीवनमा पूर्णविराम लाग्यो । उनले नेपालको राष्ट्रिय जर्सीबाट कुल ६ गोल गरे । उनले विदेशका क्लबबाट जति नै प्रस्ताव आए पनि खेलेनन् ।
किनभने उनलाई खुबै ‘होम–सिक’ हुने गथ्र्यो । घरेलु फुटबलमा भने उनी मनाङ मस्र्याङ्दी बढी आवद्ध रहे । मनाङ मस्र्याङ्दीले स्थापनाका बेला जुन खाले सफलता हात पारेको थियो, त्यसमा मणिको ठूलो हात रह्यो । सन् १९९० मा आरएनएसीका लागि मणि फुटबल खेल्न सिक्किम पुगेका थिए । अवसर थियो, गभर्नर्स गोल्डकप । मणिको खेल हेरेर मख्ख पर्नेमा एक थिए, नवीना । त्यति बेला उनी भाइचुङ भुटियासँगै एउटै स्कुलको सात कक्षामा पढथन् । पछि नवीना मणिको प्रेममा परिन् । नेपाल आएयता उनीहरूको विवाह भएको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०७:३३
सगरमाथाको उचाइ कति ?
यात्रा : पेरिसका पत्र–पत्र
लसिथ मलिङ्गा : योर्कर किङ
क्रिकेट : पीडादायी हार
भर्चुअल प्रेम : अप्रिल फूल